Uluhlu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
indlela yokubiza umnxeba we-operator kunye ne-mts
Ungabiza njani umsebenzisi we-beeline ukusuka kwi-mts 8-800-700-06-11 - le nombolo yefowuni yenzelwe ukufumana lonke ulwazi oluyimfuneko nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku. Umnxeba awusimahla. Ungayenza njenge ...
Unokuqhagamshelana njani nomnxeba we-Beeline eKazakhstan? Akukho nto imfuneko kwinkonzo ye-0611.
Uqhagamshelana njani nomqhubi weBeeline eKazakhstan? Akukho nto ifunekayo kwinkonzo ezenzekelayo ye-0611. kukho into oyifunayo. Inqaku lesi-2 - ihlokondiba. Unxibelelwano Ngokubanzi, xa ucofa u-0611, into yokuqala ukucofa ...
Indlela yokubuyisela inombolo ye-Beeline ukuba ivinjiwe emva kokungasebenzisi iSIM khadi kwiinyanga eziliqela?
Indlela yokubuyisela inombolo ye-Beeline ukuba ivinjiwe emva kokungasebenzisi iSIM khadi kwiinyanga eziliqela? [imeyile ikhuselwe] ngenene ndiyifumene inombolo ebiweyo. zama ukumbhalela. Alexander, molweni ekuseni! Ukubuyisela igumbi emva kwexesha elide ...
Indlela yokuvulela ifowuni "I-Beeline" A-100 ukusebenzisana nabanye abasebenzisi?
Uyivula njani ifowuni ye-Beeline A-100 ukuze usebenze nabanye abaqhubi? Khange ndisebenze kwaye ndibhale ingxelo, nayo, zero, ndivele ndaya kumenzi wefowuni, bandithumelele ikhowudi kwaye malunga ne-chudo ...
Yintoni i-Intanethi enekhenkethi ene-teknoloji ye-FTTB?
Yintoni i-Intanethi ye-Intanethi ye-FTTB? Yiloo nto abahlobo bam babhala ngalo mbandela ... Ukusukela ngo-Okthobha bendihlala ndisebenzisa i-Intanethi ye-fiber-optic enikezelwa ngumboneleli weVolga-Telecom. Umrhumo "wokudibanisa ngaphezulu"; ngeeruble ezingama-950 endinazo ...
Unokufumana njani ukuprinta zonke iifowuni kunye ne-SMS ukusuka kwinombolo? Ngaba kunokwenzeka ukwenza oku nge Internet?
Uyifumana njani into eprintiweyo yazo zonke iifowuni kunye neSMS evela kwinani? Ngaba kunokwenzeka ukwenza oku nge-Intanethi? Kufuneka u-odole iinkcukacha. Eofisini. iwebhusayithi (www.beeline.ru) kwicandelo "iAkhawunti yakho", icandelo "Ulwazi lwezezimali". gt; I_) Ukuprintwa ...
Ndingayibona njani imali ehlalayo kwiakhawunti yam? Ndinelayini ye-intanethi yekhaya
Ndingayibona njani imali eshiyekileyo kwiakhawunti? Ndine-intanethi ye-intanethi, uNataliya, ntambama! Ungajonga ibhalansi kwiAkhawunti yakho yobuqu. molo jonga Uyifumana njani ibhalansi yeKhaya ...
Uyenza njani isebenze iBeeline?
Uyenza njani isebenze iBeeline? Inkcazo: Sebenzisa inkonzo yoLuhlu oluMnyama- kwaye unokuzikhusela ngokulula kubangeneleli abangafunekiyo ngokubeka isithintelo kwiminxeba yabo! Ndikubizile, ...
njani ukuhlawula kwifowuni ekhaya?
Uhlawula njani i-intanethi yasekhaya kwifowuni? Guqula ityala lakho lefowuni libe yibhili yekhadi lebhanki! NgeKhadi eliSelfowuni ungathenga ezivenkileni okanye kwi-Intanethi, nokuba awunasipaji, ...
indlela yokuhambisa imali kwi-biline ukuya kwi-megaphone
Ungayitshintsha njani imali ukusuka kwindawo yokuqala ukuya kwi-megaphone okanye i-moronic beeline Ukutshintshela kwenye ifowuni Ungadlulisela imali kwiakhawunti yakho yefowuni yeBeeline ukuya kwiiakhawunti zababhalisi beenkonzo zeselfowuni ...
Unokubiza njani umnini-mgca wendlela?
ubiza njani umphathi we-beeline? akunakulindeleka ukuba udubule kanjalo, kodwa ukuba uhleli kwi-Intanethi ufake inombolo yakho yefowuni, ngaloo ndlela u-odola ukurhuma okuhlawulelweyo, ndiqinisekile ukuba umqhubi uzokunceda apha ...
Indlela yokuthatha inkokhelo ethembisiwe kwi-Beeline.
Indlela yokuhlawula intlawulo kwi-Beeline. ithini ikhiwane le sms inde kangaka ??? Batsalela amaxesha ali-10000 XNUMX kwaye isaqhubeka…. umgca ... Yinto…. Imali yazi kuphela ukuba ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,790.